Saadaq Joon oo ka dagay Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Saadaq Joon oo ka dagay Dhuusamareeb
Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska gobolka Benaadir Janaraal Saadaq Joon ayaa ka dagay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska gobalka Banaadir Janaraal Saadaq Joon ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaana ka horreeyay gaadiid iyo ciidan oo shalay iyo maanta gaaray Dhuusamareeb, kuwaas oo uu lahaa Saadaq Joon.
Si rasmi ah looma oga socdaalka Janaraalka hase yeeshee warar soo baxaya sheegaya in uu sugi doono amaanka doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu qaban doono Dhuusamareeb oo xarun u ah Galmudug.
Janaraal Saadaq Joon ayaa kamid ahaa saraakiisha ka soo horjeestay muddo korarsigii MW Farmaajo, kaasoo sababay in Muqdisho ka dhacaan dagaalo qaatay maalmo. waxaana ugu dambeyn dagaalladaasi ay sababeen in muddo kordhintii Farmaajo laga noqday, iyadoo golihii Shacabka BJFS ee markii hore muddo kordhinta u sameeyay hay'adaha dowladda ay dib uga laabteen go'aankaasi.
Taliye Saadaq oo kal hore laga xayuubiyay darajadii ciidan ayaa hadda soo gaaray Dhuusamareeb, warar hoose oo ay heshay KEYDMEDIA ONLINE ayaa waxay sheegayaan in imaashiyaha Saadaq Jooon uu wax ka ogyahay madaxweynaha Galmudug Qoorqoor oo khilaaf uu kala dhaxeeyo madaxweyne Farmaajo kaasoo ku aaddan arrimaha guddiga doorashooyinka oo weli Galmudug aysan soo gudbin.
Socdaalka Janaraal Saadaq Joon, Aamusnaanta madaxweyne Qoorqoor iyo dib udhaca guddigii doorashooyinka Galmudug ayaa waxay muujinayaan isbadal ku yimid howlihii la xiriiray doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo lagu kala aragti duwanaaday habka loo soo xulayo xildhibaanada labada Aqal ee BJFS ee laga soo doorto Galmudug.